Nepal Auto | अटो लोनको विकृती हट्दै छ
अटो लोनको विकृती हट्दै छ 23 Ashwin, 2075
निजी क्षेत्रको सवैभन्दा बढी पूजीं भएको वैंक हो, नविल । सवैभन्दा कम कस्ट अफ फन्डका कारण यो वैंकको व्याजमा लाग्ने प्रिमियम अन्य वैंकको तुलनमा केही कम छ । बैंकको पर्सनल लेण्डिङ पोर्टफोलियो २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ भने त्यसमा झण्डै ५ प्रतिशत अटो सेग्मेन्टले ओगटेको छ । अटो सेग्मेन्टमा यो वैंकले अहिलेपनि उच्च प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । वैंकको पर्सनल लेण्डिङ प्रमुखमा विगत ३ दशकदेखि कार्यरत सरोज प्याकुरेलसंग गरिएको कुराकानी :
सवारी कर्जामा गरिएको कडाइका कारण वैंक तथा वित्तिय संस्था र अटोमोवाइल क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएको छ ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अटोलोनमा गरिएको कडाइका कारण अटोमोवाइल्सको बिक्री घटिरहेको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । यसले वैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफा अनुपातमा पनि केही न केही असर त गर्ने नै भयो । पहिले बैंकहरुको पर्सनल लेन्डिङमा अटोलोनको हिस्सा ठूलो थियो भने अहिले उक्त हिस्सा कम हुँदै गएको छ । अहिले निकै कम अनुपातमा मात्र अटोलोन प्रवाह भइरहेको छ । यो प्रावधानले तत्कालका लागी दुवै पक्षलाई नराम्रो प्रभाव पारे पनि अन्तत यसले सवै पक्षलाई फाइदा नै पु¥याउँछ भन्ने मेरो वुझाई हो ।
कसरी फाइदा हुन्छ ?
पहिले जस्तो अटोलोनका नाममा हुने विकृतीहरु यो प्रावधानका कारण विस्तारै हटेर जान थालेका छन् । यसले एउटा चरण पार गरिसकेपछि अटो लोनमा पुन सहज स्थिती पैदा हुन्छ ।
पर्सनल लेन्डिङ हेड, नविल वैंक लिमिटेड
पहिले कस्ता विकृतीहरु थिए ?
राष्ट्र वैंकले कडाई गर्नुअघि वैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म अटो लोन दिने गरेका थिए । जसले अटोमोवाइल्सको कारोवार बृद्धि त भयो । तर संगसंगै धेरै विकृतीहरु भित्रिए । धेरै ग्राहकहरुले लोन टन्न पाईहालिन्छ भन्ने आधारमा आफ्नो भुक्तानी क्षमता नै नहेरी गाडी किन्ने र पछि किस्ता तिर्न नसक्दा समस्यामा पर्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण थिए । बैंकहरुले पनि अटोमोवाइल डिलरको प्रभावमा परेर डकुमेन्टको गहन अध्यानै नगरी हतारमा लोन पास गरिदिने प्रवृति थियो । यसले डिफल्टको अनुपात बढिरहेको थियो । १० प्रतिशत रकम डिलरलाई दिएर ९० प्रतिशत ऋण पाइने समयमा धेरैजसो टिनेजरले गाडी खरिद गरेका थिए । अहिले उक्त ट्रेन्डमा फेरवदल आएको छ ।
कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक आफैले अनिवार्य जुटाउनुपर्ने भएकोले अहिले पहिलेको जस्तो वैंकहरुले कमजोर डकुमेन्टका आधारमा लोन दिंदैनन् । फलस्वरुप पछिल्लो समय वास्तविक ग्राहकले मात्र अटोलोनमार्फत गाडी खरिद गर्न थालेका छन् । कर्मसियल गाडीको हकमा भने पुरानै प्रावधान अनुसार लोन प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैले यो सेग्मेन्टमा समस्या छैन ।
तर वैकहरु कर्मसियल भेहिकल्समा लगानी गर्न उदार देखिँदैनन् नि ?
उदार नभएको होइन । यसमा यातायात व्यवसायीहरुकै केही प्रावधानका कारण वैंकहरुले चाहँदाचाहँदै पनि खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । जस्तो, मसंग पैसा छ भने मैले चाहेरमात्रै गाडी किन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागी क्यु पाउनुपर्नेजस्ता यातायात व्यवसायी संघ÷समितिका केही प्रावधान मैले मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा प्यासेन्जरको तुलनमा कर्मसियल भेहिकल्सको डिफल्ट रेसियो पनि केही उच्च भएकोले लगानीपूर्व वैंकहरु सचेत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको होला ।
प्यासेन्जर कारमा पनि बैंकहरुले ब्राण्डका नाममा विभेद गर्ने गरेको गुनासो छ, त्यस्तै हो ?
ब्राण्डकै नाममा बिभेद गरी लोन नदिने भन्ने हुँदैन । तर यत्ति हो कि नयाँको तुलनामा चिनिरहेको अर्थात देखिरहेको वस्तुमा बढी नै विस्वास गरिन्छ । भोली उपभोक्ताले किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा वैंकले सोही गाडी विक्री गरेर बाँकी लोन चुक्ता गराउनुपर्ने अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै नयाँ ब्राण्डमा केही कडाई गरेको हुनसक्छ । तर यदि उपभोक्ताको आयस्रोत बलियो छ र उसले समयमै किस्ता तिर्न सक्छ भन्ने वैंकलाई विश्वास भयो भने यसमा कुनै समस्या हुँदैन ।
अटोलोनसँग सम्बन्धित विद्यमान प्रावधान परिवर्तन भई पुरानै लयमा फर्किने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
तत्कालै त्यस्तो म देख्दिन । किनभने नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्रि पुरानै भएपनि रिटेल लेण्डिङ आएको १०–१२ बर्षमात्र भएको छ । शुरुवाती अवस्थामा यसलाई वैंक र उपभोक्ता दुवैले नयाँ प्रोडक्टका रुपमा लिए । जसमा दुवै पक्षको अनुभव निकै कम थियो । तर अहिले दुवै पक्ष परिपक्व भएका छन् । बैंकले पनि कर्जा दिएरमात्र हुदो रहेनछ । उठाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेछ भनेर वुझ्न थालेका छन् । लिनेले पनि आफ्नो क्षमता नहेरी कर्जा लिंदा तिर्न समस्या हुने कुरा बुझ्दै गएका छन् । यसमा अटोमोवाइल डिलरहरु पनि त्यत्तिकै परिपक्व हुँदै गएका छन् । पहिले लोनलाई आधार मानेर पुस सेल्स गर्ने डिलरहरु अहिले विस्तारै लाइनमा आउन थालेका छन । त्यसमामा पनि राष्ट्र बैंकबाट नै यस विषयमा कडाई भएपछि आफूखुसी जान सक्ने कुरै भएन ।
बैंकहरुको नाफमा यसले असर पु¥याएको छैन ?
नविल वैंकको हकमा भन्नुपर्दा कुल पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशत रिटेल लेण्डिङले ओगटेको छ । त्यसमा अटोमोवाइलको हिस्सा ५ प्रतिशत हाराहारीमा होला । वैंकको कुल पोर्टफोलियोलाई हेर्ने हो भने यसको योगदान २ प्रतिशत हाराहारीमा होला । यस हिसावले यो सेग्मेन्टको योगदान राम्रै छ । तर हामीले, बुझ्नुपर्छ कि तत्कालका लागी नाफा आर्जन गर्नु आफ्नो ठाउँमा ठिक भएपनि त्यो दिर्घकालिनसम्म रहन्छ कि रहदैन भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । क्षणिक नाफाका लागी उच्च जोखिम लिनुभन्दा कम जोखिम लिएर कालन्तरसम्म नाफा कमाउने बातावण बन्दा बैंकहरुलाई फाइदा हुने देख्छु ।
नविल वैंकबाट अटोलिन लिनेले अन्य बैंकको तुलनामा थप सुविधा के पाउँछन् ?
सवै वैंकले दिने सेवा सुविधा उस्तैउस्तै नै हो । तर नविल सवैभन्दा पुरानो, क्यापिटल बढी भएको र कस्ट अफ फण्ड कम भएको वैंक भएको हुँदा अन्यका तुलनामा हामी अलिक बढी लचिलो भएर प्रस्तुत हुन सक्छौ । अरु वैंकलाई १ प्रतिशत व्याज कम गर्नु प¥यो भने समस्या पर्न सक्छ भने हामीलाई यसले खासै असर नगर्न सक्छ । यसका साथै हाम्रोमा ग्राहकको सोचअनुसार प्रोडक्टलाई मोडिफाई गर्न सकिने अवस्था छ । व्याज दर र एड्मिन फि हाम्रोमा केही कम छ । ब्याजदर बृद्धिमा स्थिरता छ । अन्य वैंकहरुले जस्तो व्याजदर ह्वात्त बढाउने काम हाम्रोमा हुँदैन । कम व्याजदरमा लोन दिने वैंकको सुचीमा हामी अगाडी छौ । अहिले हामीले प्यासेन्जर कारमा ११ दशमलव २८ प्रतिशत र कर्मसियलमा १२ दशमलव ५३ प्रतिशत व्याज लिइरहेका छौ । विस्तारै यो दर घट्दै जानसक्छ । हामीकहाँ प्रवेश गर्ने ग्राहकलाई शुरुवातमा केही कठिन भएको महशुस हुनसक्छ तर छिरिसकेपछि उहाँहरुलाई सम्पूर्ण प्याकेज सहतिको वैंकिङ सेवा उपभोग गर्न सहज हुन्छ ।
मियामा मोटर्सका अध्यक्ष समिर यादव भन्छन : इलेक्ट्रिक स्कुटर अव अनिबार्यता नै भइसक्यो ।